Ukhozi Bay View - I-Airbnb
Ukhozi Bay View
Ikhaya likanokusho lesimanje elinezitezi ezi-2 liphakeme ngaphezu kwe-pristine Eagle bay. Ehektheni elilodwa lehlathi lemvelo elihle. Vuka ubone ukubukwa kolwandle - uma unenhlanhla uzobona imikhomo nama-kangaroo evamise ukuvakashela ingadi. Hamba uye ebhishi nasezindaweni ezidayisa iwayini zendawo nezindawo zokudlela. Ifakwe ngokugcwele, ilula futhi inethezeke kakhulu ukubaleka kwangasese.
Izinsiza zifaka umshini wekhofi we-Nespresso, i-NBN WiFi esheshayo, i-smart TV ene-Apple TV, i-Netflix njll, ibhodi lokugwedla, umtapo wezincwadi obanzi wezincwadi nemidlalo.
4.78 out of 5 stars from 61 reviews
4.78 · 61 okushiwo abanye
Indawo ethule emangalisayo ku-1 acre yezihlahla zendabuko ezimangalisayo phezulu egqumeni elingaphezulu kwe-Eagle Bay Beach - ulwandle olungcono kakhulu ongake ulubone!
Sincoma kakhulu i-Little Fish Restaurant (0897552455) ngesidlo sakusihlwa - cishe imizuzu eyi-15 ukushayela futhi i-Wise Winery ilungele ukudla kwasekuseni noma kwasemini - umzuzu ongu-1 ukusuka. Futhi bane-Lot 80 - engavamile kakhulu endaweni efanayo nokudla okuhle.
Ukuthola ukudla okuvamile nezingane Clancys on Caves rd kuhle (imizuzu eyi-10 ukushayela). Ukuvakashela e-Margaret River Chocolate Factory kuhle-banesidlo sasemini nje kanye nokunambitha ushokoledi wamahhala.
Okwamawayini anesidlo sasemini zama i-Aravina Estate (imizuzu eyi-15-20) kanye ne-Wills Domain (imizuzu engama-20-25)
Ngihlala ePerth kodwa nginommeleli wendawo ongakwazi ukuya uma kunesidingo esiphuthumayo. Ngitholakala ngaso sonke isikhathi ku-09419151050